Ciyaaryahanka Liverpool Nuri Sahin Oo Sheegay In Uu Garanayo Halka Uu Doonayo Inuu Ku Biiro Kaka - jornalizem
Ciyaaryahanka Liverpool Nuri Sahin Oo Sheegay In Uu Garanayo Halka Uu Doonayo Inuu Ku Biiro Kaka
Ciyaaryahanka haatan sida amaahda ah ugu ciyaaro kooxda Liverpool ayaa shaaciyay in ciyaaryahanka Real Madrid e Ricky Kaka uu iska diiday dalab ugaga yimid koox ka ciyaarta dalka Turkiga sanadkan waxana uu go’aansaday Kaka halka uu ku biirayo marka uu furmo suuqa ciyaaryahanada.
Ciyaaryahankan reer Brazil ayaa si weyn loola xiriirinayay xaggaagan inuu isaga tagayo Real Madrid, balse waxa uu ku guuldareystey in uu ka tago Real xaggaagan, waxana uu halgan u galay sidii uu ugaga mid noqon lahaa kooxda uu ciyaarsiiyo Jose Mourinho.
Sahin oo hal sano si amaah ah hadda ula joogo kooxda Liverpool ayaa isagoo arrinta ku saabsan Kaka oo ay isku hore u ahaayeen uu sheegay:
“Waxaan ogahay in uu dalab ugaga yimid koox ka dhisan Turkig,”ayuu Sahin u sheegay NTVSpor.
“Waxaan kale oo aan ogahay go’aanka uu qaatay iyo halka uu ku biirayo marka uu suuqu furmo balse ma kashifayo.”
Ciyaaryahankan qadka dhexe ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladiisa iyo sida uu u arko kooxda uu sida amaahda ah ugu ciyaaro ee Liverpool waxana uu yiri: “Waxaan si amaah ah ugaga tagay Real kadib markaan saddex jeer la kulmay Mourinho, waxaan doortay Liverpool sababtoo ah waxaan doonayay in aan u ciyaaro koox leh taariiq wanaagsan.
“Waxaan u soo ciyaaray kooxo waaweyn oo ka dhisan Germany iyo Spain hadana waxaan u ciyaaraa kooxda ugu wanaagsan England.
“Steven Gerrard waa ciyaaryahan cajiib ah, wuxuu xanaaneeyaa ciyaartoyda dhalinyarada ah, gar ahaan Raheem Sterling, wax badan ayaan ka baran karaa isaga, waxayna ii tahay sharaf in aan ka dhinac ciyaaro Gerrard.”